Ahoana no hanatsarana ny lisitry ny Amazon ho an'ny SEO tsara indrindra?
Fa maninona ny lisitra Amazonanao dia tokony ho SEO-optimized?
Na dia fantatry ny mpividy entana maherin'ny 488 tapitrisa aza ny tsenan'ny fivarotana be mpividy, dia manana mpividy mividy mividy zavatra any. Izany no antony tokony hahamarika eo ny lisitra Amazon anao dia tokony ho SEO-tsara tsara. Raha tsy izany, ny zavatra entinao amidy amazonin'i Amazona dia tsy hahazo ny mason'ny mpividy mihitsy, sa tsy izany?
Nalaina tamin'ny ankapobeny, misy antony marobe marobe izay afaka manampy ny lisitry ny vokatrao tsara kokoa amin'ny fikarohana Amazon - ssh commands ubiquiti networks. Ity no tena mahatonga ny lisitry ny Amazon rehetra ho tsara kokoa amin'ny SEO manontolo:
Ny singa endriky ny singa manokana amin'ny fizarana lisitra fototra, toy ny Product Title, Product Description, ary ny lisitry ny Bullet Points;
Ny fitombon'ny mpanjifa sy ny hafatr'izy ireo amin'ny taranaka na / ary ny fanitsiana natao tamin'ny fomba maro;
Taratry ny fivoarana (raha tsy izany, firy ny isan'ny lisitry ny mpitsidika niova fo ho ny tena mpividy);
Ny habetsaky ny vola amidy, ary ny faharetan'ny fifampiraharahana mahomby ho an'ny vokatra voafantina.
Tips and Tricks for Getting Amazone Lusting SEO-optimized
, nefa mety tsara ny manavaka ny vokatrao - mamakafaka fotsiny ny mpifaninana akaiky indrindra amin'ny orinasa na ny sokajinao mba hahitana izay miasa ho azy ireo, ary inona no tokony hohalavirina amin'ny fotoana iray. Noho izany, ny fikarakarana fikarohana lalao fifaninanana dia toerana mahafinaritra ho anao raha manana kickstart miaraka amin'ny Amazon lisitry ny SEO. Ny zavatra dia tsy mila mijery ireo mpivarotra ambony ao amin'ny orinasa na ny entana ianao. Tsara kokoa ny mifantoka amin'ny lohatenin'ny vokatra, ny famaritana vokatra ary ny lisitry ny lahatsoratry ny bala ampiasain'ireo mpanohitra mahomby anao. Raha manao izany ianao, dia azo inoana fa hahalala hevitra sy hahatakatra ny dikany ianao, ka ny teny sy ny teny fikarohana dia hanompo anao tsara ihany koa. Mba hahazoana fahatakarana ankapobeny momba ny tombontsoa azo amin'ny fifaninanana tsara indrindra ampiasain'ireo mpifanandrina aminao akaiky indrindra, afaka mampiasa mpiserasera an-tserasera toy ny Google Keyword Planner ianao (fikarohana fototra amin'ny teny fototra manan-danja), ny votoatiny (fikarohana fifaninanana miaraka amin'ny soso-kevitry ny teny fanalahidy tsara indrindra nalaina mivantana avy amin'ny mpamaky anao lisitry ny vokatra), ary koa ny Keyword Inspector (ny kitapo iray manontolo mba hahita tsara ny teny fanalahidin'ny mpifanolo-bodirindrina akaiky anao).
Tier Two: Ny fikarohana momba ny tenanao manokana
Rehefa avy nahazo sary lehibe momba ny lisitra SEO ianao miaraka amin'ny mpifaninana aminao, dia fotoana hihazakazahana ny fikarohana nataonao manokana. Manoro hevitra aho ny manomboka amin'ny fametrahana ny lisitry ny fanalahidy lehibe indrindra amin'ny teny fanalahidy manan-danja ary ireo fehezan-teny lava lava izay matetika ampiasain'ireo mpividy mavitrika mivantana amin'ny fikarohan'ny vokatra. Ny zavatra dia matetika, ny lanjan'ny liona amin'ny mpampiasa mividy any Amazona dia tsy tonga eo fotsiny raha hijery fotsiny. Midika izany fa matetika izy ireo no tonga amin'ny fikarohana amazonaly efa manana sombin-tsaina ao an-tsaina. Noho izany, ny zavatra rehetra ilainao dia ny mamela ny bara fitadiavana hanompo azy ireo amin'izany. Ary izany no mahatonga ny fisafidianana ny teny fikarohana mety dia ny ampahany manan-danja indrindra amin'ny fanaovana izany. Ho fanatanterahana ny asa, dia manoro hevitra aho amin'ny fitadiavana ny fikarohana amin'ny tenimiafinao manokana amin'ny fampiasana ny iray amin'ireo fitaovana rindrambaiko manokana miaraka amin'ny rafitra ety anaty aterineto: Scope, AMZ Tracker, Unicorn Smasher, Teny Merchant, sns. Izy rehetra dia ampiasaina, Manoloana anao ny manapa-kevitra hoe iza no tokony horaisina.